खानीखोला प्रभावितलाई आजदेखि सेयर, यस्तो छ कम्पनी | NewsKarobar
गृहपृष्ठ खानीखोला प्रभावितलाई आजदेखि सेयर, यस्तो छ कम्पनी
खानीखोला प्रभावितलाई आजदेखि सेयर, यस्तो छ कम्पनी
२० कित्तादेखि ९ हजार कित्तासम्ममा आवेदन दिन सकिने
ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले मंगलबार (माघ २२) गतेदेखि १८ करोड रुपैयाँबराबरको १८ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी पूँजी एक अर्ब ८० करोडको १० प्रतिशत सेयर जारी गर्न लागको हो ।
कम्पनीको कुल जारी पूँजी मध्ये ८० प्रतिशत प्रबद्र्धक आफैंले राखेका छन् । १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीलाई र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागेका हुन् । ग्रिन लाइफले गौरीशंक गाउँपालिका वडा नं. ७ मार्बूमा ४० मेगावाटको खानी खोला १ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहको छ ।
कहाँ–कहाँबाट गर्न सकिन्छ आवेदन ?
स्थानीयहरुले ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडको आयोजना स्थल, सेञ्चसरी कमर्सियल बैंक सिंगटी र चरिकोट शाखा तथा प्राइम कमर्सियल बैंकको शाखा कार्यालयहरु जिरी र मैनापोखरी शाखा कार्यालयमार्फत आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी गौरीशंकर गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यालय छेऊमा पनि क्यापिटल आफैंले सेयर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए । चरिकोटमा एउटा मात्र बैंक भए तापनि आवेदनकर्ताको भीड बढेमा थप संकलन केन्द्र थप गर्न सकिने उनले बताए ।
यस आईपिओमा आयोजना प्रभावित बासिन्दाले निष्काशन सुरु हुने दिन माघ २२ गतेदेखि छिटोमा १५ दिन अर्थात फागुन ७ गतेसम्म र डिलोमा ३५ दिन अर्थात फागुन २७ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।
आईपीओ रेटिङमा कमजोर
ग्रिनलाइफले निष्काशन गर्ने आईपिओका लागि केयर रेटिङ्स नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित बासिन्दाका लागि जारी गर्ने आईपिओलाई केयर रेटिङ नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसतभन्दा कमजोर रहेको जनाउँछ । केयर नेपालले उक्त रेटिङको अवधि एक वर्षसम्म कायम रहने जनाएको छ ।
कम्पनीको २०७४ पुस ३० गते सम्पन्न आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट स्थानीयका लागि आईपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएकोमा धितोपत्र बोर्डबाट १७ गते अनुमति पाएको हो । कम्पनीले गत भदौ पहिलो साता आईपिओ निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
यस्तो छ आयोजना
कम्पनीले दोलखाको मार्बु गाविसमा ४० मेगावाटको खानिखोला १ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको कूल लागत ६ अर्ब ३९ करोड ३८ लाख अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत १६ करोड पर्ने देखिन्छ ।
आयोजनाको हालसम्म ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । तर आयोजनास्थलदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सव स्टेशन सिंगटीसम्म २५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । सिंगटी लामोसाँघु प्रसारण लाइनको काम पनि ग्रिन लाइफकै प्रवर्धकहरुले नै गरिरहे तापनि त्यसको पनि काम समयमा पूरा हुनेमा आशंका छ । यस कारण पनि एक वर्ष अघि यसको विद्युत उत्पादन हुनेमा आशंका छ ।
आयोजनाबाट साधारण लगानी फिर्ता हुन ७.४९ वर्ष र सिडस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १३.१६ वर्ष रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत २०६८ भदौ १९ गते २०७५ चैत व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्नेगरी खरिद बिक्री सम्झौता भएकोमा २०७४ साउन १ गते पाँचौं संसोधन गरेको छ । प्रसारण लाइनकै कारण आयोजना ढिला भएको हो । आयोजनाको काम ढिला हुँदा लागत समेत बढेको हो ।
ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर २०६६ असोज ४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट कम्पनीको रुपामा दर्ता भई २०७४ असार ९ गतेदेखि पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण भएको हो । कम्पनीले विद्युत विकास विभागबाट वि.सं. २०६८ बैशाखमा विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको छ । यसअनुसार उक्त अनुमति प्राप्त भएको मितिले ३५ वर्ष अर्थात वि.सं. २१०१ वैशाखसम्म कायम रहनेछ ।
कुन क्षेत्रका बासिन्दालाई कति ?
यस आईपिओमा दोलखा जिल्लाको आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र गौरीशंकर गाउँपालिका र विगू गाउँपालिका वडन नं. ४ का स्थानीयबासीले यसमा सेयर आवेदनमा भाग लिन पाउँने छन् । यसमा पनि अपर तामाकोसीको जस्तै अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरी ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
अति प्रभावित समूह ’क’ अन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं ७ मार्बु बासिन्दाहरुलाई पाँच लाख ४० हजार कित्ता (३० प्रतिशत) का लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । यहाँ आयोजनाका सम्पूर्ण संरचनाहरु निर्माण भएका छन् ।
यसैगरी समूह ’ख’ अन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं ५ सुरी, ६ चंखु, ८ खारे र ९ नं वडाका बासिनदाका लागि ७ लाख २० हजार (४० प्रतिशत) कित्ता सेयरका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । यहाँ सडक र प्रसारण लाइन पर्दछ ।
यस्तै समूह ’ग’ अन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं १ र २ जँगू वडा नं ३ र ४ झ्याँकु र विगु गाउँपालिका वडा नं ४ लादुकका बासिन्दाका लागि ५ लाख ४० हजार कित्ता सेयर छुट्टाइएको छ ।
स्थानीय तहको सरकार र इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रभावित क्षेत्रका लागि स्थानीय सेयर जारी गरिएको ग्रिन लाइफ हाड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश शर्माले जानकारी दिए ।
२० कित्तादेखि ९ हजार कित्तासम्ममा आवेदन
तीनवटै समूहका बासिन्दाहरुको यस हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम २० कित्तादेखि अधिकतम ९ हजार कित्तासम्म आवेदन गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिएको आयोजनाको सेयर पाइने बिक्री प्रबन्धक काठमाडौं क्यापिटलले जनाएको छ । हाइड्रोपावर कम्पनीले अघि नै काठमाडौं क्यापिटललाई सेयर निष्काशक तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ ।
हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दाका लागि पहिलो चरणमा निष्काशन गर्ने सेयर आरक्षित गरेर निष्काशन गर्न गर्दछन् । स्थानीय बासिन्दाहरु त्यस क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन हुँदा त्यस आयोजनाबाट प्रतक्ष्य अप्रतक्ष्य रुपमा आयोजनाले प्रभाव पार्ने हुँदा आयोजनाबाट हुने आम्दानीमा स्थानीय जनताको हिस्सेदारी कायम रहोस् भन्ने उदेश्यले कानूनी रुपमा नै आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आरक्षणमा प्राप्त हुने भएकाले यस्तो सेयर बिक्री भएर बाँडफाँड गरेको तीन वर्षसम्म बिक्री वितरणका लागि बन्देज लगाइएको हुन्छ । यस्तै स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि पहिलो चरणमा नै सेयर निष्काशन हुने हुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन हुने साधारण सेयरमा आवेदन गर्न समेत बन्देज लगाइने गरिएको छ ।
प्रकाशित समय ०७:२८ बजे
पछिल्लाे - सुदूरपश्चिम समृद्धिको आधार पर्यटन : चन्द्र ढकाल
अघिल्लाे - उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ द्वारा संवाद मञ्च गठन